पत्रपत्रिकाबाट Archives - NepalPana
ओलीको निर्देशनमा राष्ट्रपतिले उठाईन यस्तो कदम, संविधानविद्दको आपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख दलबीच सहमति नभएसम्म राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे छिटो सहमतिमा पुग्न सुझाब दिएकी छिन् । कांग्रेस […]
मञ्चमा भक्कानिए एक्ला सांसद: अध्यक्षलाई दिए यस्तो संज्ञा
झापा । क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी भएका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका एकमात्र सांसद हुन् । उनलाई सम्मान गर्न शनिबार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित शीर्ष नेता झापा पुगे । सम्मान थापेपछि बेल्नको लागि ड्यासमा उभिएका लिङदेन भक्कानिएका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ […]
किन बढ्न सकेन कांग्रेसको जनमत?, कसरी बढे वामपन्थी ?
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पछिल्लो निर्वाचनबाट वामपन्थी दलहरू झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेका छन् भने नेपाली कांग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। राप्रपालगायत अनुदारवादी शक्ति बिलाउँदै गएका छन् भने मधेसी दल नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका छन्। ०१५ सालदेखि अहिलेसम्मका ७ निर्वाचनमा वामपन्थी वर्चस्व कसरी […]
महिला प्रतिनिधित्वको प्रभाव: समानुपातिकबाट २९ पुरुष
मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारहरु न्यून देखिए । त्यसमा पनि विजयी हुने महिलाहरुको संख्या झन् न्यून भयो । संविधानले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा) मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सबै […]
पार्टी पराजयपछि देउवाको यस्तो छ तयारी, के दिन्छन त राजिनामा
काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी महासमिति बैठक बोलाउनेबारे निकटस्थसँग छलफल सुरु गरेका छन् । संघ र प्रदेशसभा चुनावमा नराम्रोसँग पराजय भोगेको कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तन, महासमिति बैठक, विशेष महाधिवेशनसम्मको माग उठेपछि देउवाले महासमिति बैठक बोलाउनेबारे छलफल गरेका हुन् । देउवानिकट नेता बालकृष्ण खाँणले शुक्रबार […]
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाअन्तर्गत बिहीबार हुन गइरहेको दोस्रो चरण निर्वाचनमा प्रमुख दलका सबैजसो शीर्ष नेताले मतदान गर्दै छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । कुन नेता कहाँ मतदान गर्दै छन् ? प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउपालिका- १, रुवाखोलास्थित असिग्राम मावि मतदान केन्द्रबाट […]
दोस्रो चरण प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार सोमबारदेखि सकिएको छ । सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएकाले दिउँसो र साँझसम्मै दलका उम्मेदवार प्रचारप्रसारमा व्यस्त बने । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश ७ का कार्यक्रममा व्यस्त रहे भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा […]
जेलबाटै चुनावी चलखेलः निधि-महतो भिडन्तमा टक्लाको प्रवेशले झन रोचक
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय जना पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र नेपाली कांग्रेसका प्रभावशली नेता विमलेन्द्र निधिबीचको चुनावी टक्कर देशमै चर्चाको विषय बनेको छ । यो टक्करमा जित नकसको हुन्छ भन्ने प्रश्नले नेपाली राजनीतिको बजार तताएको छ । निधि […]
काठमाण्डौ । चुनावी प्रचारक्रममा कांग्रेस र वाम गठबन्धनका नेता एकअर्काविरुद्ध खनिन थालेका छन् । जिल्ला दौडाहामा रहेका शीर्ष नेता नै ‘अशिष्ट शैली’ मा गालीगलौजमा उत्रिन थालेका हुन्। एकले अर्कोलाई लोकतन्त्र मास्ने खेलमा लागेको, पश्चगमन ब्यूँताउन लागेको, सम्मान गर्न नजानेको जस्ता आरोपसहित नेता चुनावी अभियानमा होमिएका […]
काठमाडौं १२ मंसिर । सरकार बेरुजु रकम नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । कात्तिकसम्म राज्यकोषमा एक खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्योट दर निकै सुस्त देखिएको जनाएको छ । खर्च […]